Si taxaddar leh u Baadh faahfaahinta qandaraaskaaga adoo u maraya qandaraas qiimaynta | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Si Ba'an u Baadh faahfaahinta Qandaraaskaaga Adiga oo maraya Vetting Vetting
Fikradda Sharciga ah
Qandaraas sharciyeed ama heshiis waa uun dhokumenti dukumenti ah oo ay labada qaybood saxeexaan, laakiin waxay ka ilaalinayaan qofka ganacsigiisa xuquuqda iyo xallinta. Heshiisku wuxuu abuuraa mas'uuliyado, xaalado, arrimaha lacagta, xaddidaadda waqtiga, iyo in ka badan sidaa darteed qayb kasta oo ka mid ah heshiiska si sax ah ayaa loo shaabadeeyay, kaas oo, haddii uu guuldareysto, u horseedi kara khasaaro aan la fileyn.
sharciyeynta sharci ahaanta ayaa looga baahan yahay Dubai iyo UAE
heshiisyada sharciga ama qandaraasyada
cadeynta heshiiska dukumintiga
Iyadoo aan laga taxadarin saxeexida heshiiska qoraalka ah, waxaan la saxiixan karnaa heshiisyo xaalado aan wanaagsanayn oo anfacaya annaga ama danaheenna.
Waa maxay Qandaraas qandaraas
Qandaraasyada Vetting ama Vetting Sharciyeed micnaheedu waa ficil si taxaddar leh oo taxaddar leh u baaraya dukumiintiyada la fulinayo marka loo eego sharciga. Natiijooyinka kala shaandheynta qandaraaska si taxaddar leh ku dheehan tahay heshiiska, kaas oo hubinaya waxyaabaha soo socda:
Hubinta sharciga ee dukumiintiyada shirkadda kala duwan ee u doodayaasha. Talada Garyaqaan ee arrimaha xasaasiga ah. U hogaansanaanta sharciga.
Dhammaan dhawritaanka ayaa la qaatay
Qeexida doorar gaar ah
Arrimaha si fiican u soo bandhigayaa
Caddaynta dhinacyada iyo shuruudaha lacagta, iwm.
waajibaadka iyo mas'uuliyadaha dhammaan dhinacyada ay quseyso
Qandaraasleyda inta badan waa loo habeeyay, looguna talagalay, ayna fuliyaan shirkado aragtidooda muujinaya waajibaadka iyo mas'uuliyadaha dhammaan dhinacyada ay quseyso si loo yareeyo khataraha. Mulkiileyaasha ganacsiyada yar yar iyo maareeyayaasha heersare ah had iyo jeer waxay qoraan heshiisyo inta ay shaqeynayaan.
Maadama ay jirto baahi loo qabo heshiis in la aqriyo, la fahmo, lana falanqeeyo iyadoo laxiriira ereyada iyo muujinta loo adeegsado jirka heshiiska. Waa lagama maarmaan in shuruud la'aan ay tahay in ereyada macmalka ah lagu daro ama in macno dheeri ah la dhigo oo aan ka ahayn waxa si macno ahaan loo fahmay.
Baadhitaanka qandaraas bixinta iyo hubinta mihnadlaha
Sidaa darteed, u raadinta baaris sharciyeed waa lama huraan haddii aad rabto inaad naftaada ka badbaadiso duruufo aan la fileyn oo laga hortegi lahaa haddii tallaabada sharciga ah ee saxda ahayd ee kala saaridda dukumiintiyada waqtigeeda la fuliyo.
Waa la dilaayaa in la adeegsado nuqullada ama heshiisyada sharciga ah ee khaldan / qandaraas, sidaas darteedna waa muhiim in lala xiriiro khubaro sharci oo sameyn kara dukumiinti sharci ah oo habboon iyo kala shaandheynta xirfadda.
Ahmiyadaha ugu waaweyn ee Heshiiska Vetting
Baadhitaanka qandaraasku waxay u baahan tahay in qofku sameeyo baaritaan qoto dheer oo ah ulajeeddooyin, qoraallo, dib loogu soo celiyo, iyo halista si loo ilaaliyo baahida macmiilka, loona fududeeyo socodka macaamil xawaare leh.
Sharciga qandaraasyada ugu weyn waxaa laga soo qaatay sharciga heshiiska Ingiriiska, kaas oo si weyn xoogga saaraya rabitaanka kooxaha wax soo iibsanaya inay iskood isugu xidhaan heshiis ay ku beddelanayaan ganacsi ama adeeg.
In Jones V Padavatton, waxay maxkamaduhu rabeen inay si cad u qeexaan farqiga u dhexeeya qabanqaabada qoyska iyo heshiisyada ganacsiga. Heshiiska qoysku markasta ma aha mid fulinaya heshiisyada qandaraaskuna waa inay ku dhexjiraan iyaga dhexdeeda ujeeddada ganacsi si cad. Sidaa daraadeed, inta qandaraasyada la baaraandegaayo, ujeedada ah inay midba midka kale ku xirato sharci ahaan meheradda waa inay ahaataa mid cad.
Xagga sare, waxa muhiim ah in la hubiyo in dhinacyada heshiiska galay la yaqaan, awooda ay u leeyihiin inay matalaan shirkadahooda kala duwan iyo awooda ay u leeday qandaraas iyo goobta ganacsiga la hubiyay. Xaaladaha ay jiraan ilaa 3 ama inka badan oo dhinac ah oo lala xidhiidho, xooga baarista waxay u baahan kartaa in laga adkaado si loo awoodo in loo dejiyo ujeeddada qof walba.
Markay labada dhinac isku xidhaan meheradda, ujeedada heshiisku waa inay ahaataa mid cad.
Haddii ujeedadu la xiriirto iibka wanaagsan, waxaa macquul ah in “x” ay soo saarto oo iibiso badeecada AB iyo “z” waa soo saaraha badeecada XY oo alaabooyinka AB ay soo galinayaan.
Iibka fudud ee 'Good of Good', oo ah halka alaabtu ay yihiin mid jaangooyey, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan tahay in qeexitaan gaar ah looma baahna, laakiin si taxaddar leh, waxaa macquul ah in la qeexo oo la qeexo "Alaabada," "Qaybaha," "Qaybta iibka," "Amarka Iibsiga, "" Maalinta Bixinta "," taariikhda iyo qaabka bixinta, "'Goobta bixinta," "baajinta", iwm
Si kastaba ha noqotee, halka shuruudaha badeecada loo diyaarshay ay adagtahay, sida kuleyliyaha, qalabka korantada ku takhasusay, alaabada injineerinka, iyo wixii la mid ah, waxaa lagugula talinayaa in la hubiyo in sifaha oo dhan iyo qeexitaanada loo qeexo.
Intaas ka dib, heshiiska waa in uu sheegaa dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha ay tahay in ganacsigu kudhaco.
Sidee qoraalka Qandaraasku uga duwan yahay Qandaraaska Qandaraaska?
Diyaarinta qandaraaska iyo kala shaandhaynta qandaraasku waa laba marxaladood oo kala duwan hanaanka qandaraaska. Qabyo qoraalka qandaraasku waa geedi socod ku lug leh qoritaanka qofka kaasoo qandaraas ka soo qaada halka laga bilaabo ilaa meesha ugu dambeysa.
Nidaamka kala shaandheynta qandaraaska, qofka wax qoraya waa dib u eegis wuxuuna ka shaqeyn doonaa qaabkii hore ee qandaraaska (kan horey loo soo diyaariyey) si uu u sameeyo waxyaabaha ku darista iyo tirtirka shaxda heshiiska jira.
xoogga saar tilmaamayaasha gaarka ah ee qaabka heshiiska jira
Xirfadlayaasha ka shaqeeya shirkadaha qaarkood waxay awoodi doonaan inay qandaraasyada ka baaraandegaan laba sababood awgood:
Waa midkoodna shirkadaha noocaas ahi inay lahaadaan qaab qoraal oo ay iyagu leeyihiin; iyo
Kadaba waxay soo dirtaa qaab qoraal ah oo qandaraaskooda ah si dib loogu eego.
Habka kala shaandheynta, qalooca barashada ayaa ku xaddidan aqoonyahanada maadaama ay u baahan yihiin inay diiradda saaraan tilmaamayaasha u gaarka ah qaab dhismeedka jira oo aaney helin rajada ah inay howsha gacanta ku qabtaan marka koowaad.
cilmi baaris dhameystiran oo ku saabsan qodobada kala duwan
Si kastaba ha noqotee, dhinaca kale, habraaca qoraalka qoritaanka, qofka qabyada ah ayaa had iyo jeer heshiiskiisa oo dhan ku qabta isaga / iyada iyada oo si gaar ah diiradda loo saarayo daqiiqad kasta oo daqiiqad kasta laga bilaabo barta bilowga illaa gunaanadka.
Qabyo-qoraalka qandaraasku wuxuu u oggolaanayaa qofka samaynaya qabyo-qoraalka inuu helo fursad uu ku barto farshaxanka qoritaanka iyada oo la adeegsanayo, taasoo u suurtagelisa cilmi-baaris dhameystiran oo ku saabsan qodobbada kala duwan inuu barto weedh kasta xudunta u ah.
Waxaa lagu taliyaa in maskaxda maskaxda da'da yar ay diirada saaraan barashada qorista qandaraaska (si ay wax ugu bartaan shaqada gacanta koowaad) xudunta si ay ugu fiicnaadaan qoritaanka qandaraaska ama kala shaandheynta qandaraaska.
Qandaraasyada Sharciyeed / Drafting / Vetting
Qandaraaslayda Qandaraaslayda iyo Qandaraasleyda Adeeg Bixiyaasha Ku Sugan Dubai. Baadhitaanka sharci ee dukumiintiyada kala duwan. Bixinta Muuqaalka Sharciga. Talobixinta arrimaha xasaasiga ah. Waafaqsanaanta sharciga.